Gudoomiyihii degmada Burtinle oo xilkii laga qaaday – Radio Daljir
Gudoomiyihii degmada Burtinle oo xilkii laga qaaday
Burtinle.Feb 5 -Kalfadhiga ay golaha deegaanka degmada Burtinle xilka uga qaadeen gudoomiyiha degmada Burtinle Axmed Khaliif Faarax ayaa waxaa kasoo qaybagalay 21- mudane oo ka mid ah golaha deegaanka ee Burtinle.
Golaha deegaanka ee degmada Burtinle oo fadhigooda uu goob joog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa waxaa 14-ka mid ah gollaha deegaanku ay u codeeyeen inay xilkii ka qaadeen gudoomiyaha degmada Axmed Khaliif Faarax,halka todobo xubnood ay kasoo horjeesteen xilka in laga qaado gudoomiyaha degmada.
Gudoomiye Axmed Khaliif Faarax oo la hadlay Radio Daljir ayaa waxaa uu sharci darro ku tilmaamay xilka qaadista lagu sameeyay,isagoona ku’eedeeyay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Qarjab inuu arintan uu lug ku lahaa.
“Sharciga law nambar 7 ee wasaaradda arimaha gudaha waxaa uu sheegayaa in gudoomiyaha ay xilka ka qaadi karaan sadex meelood laba meel oo gola deegaanka ah,fadhiga maantana waxaa ka maqnaa laba mudane,7 xubnood ayaana itaageertay waana sharci darro xilka qaadista”ayuu yiri gudoomiyaha degmada Burtinle Axmed Khaliif Faarax.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Qarjab oo isaguna la hadlay Radio Daljir ayaa waxaa uu iska fogeeyey inuu wax fara galin ah uu ku sameeyey maamulka degmada Burtinle,balse ay jirtay mowshin ay soo gudbiyeen xubnaha golaha deegaanka ee degmada Burtinle,sidaasi darteedna uu ansaxyahay xilka qaadista.
Gudoomiyaha kuxigeenka degmada ayaa xiligaan waxaa uu si kmg ah sii wadaa howshii maamulka degmada inta maamul cusub ay dooranayaan gollaha deegaanka,gudoomiyihii hore ee degmada Axmed Khaliif Faarax ayaa isaguna sheegay inuu taageeri ka dhawr sugi doono go’aankasta oo wasaaradda arimaha gudaha ay kasoo saarto arintii xilka looga qaaday.